FAQs - Franchise Mikana Inotengeswa | Franchiseek
Franchise Mikana Yekutengesa
Bhurawuza kuburikidza nemazana emahara evanotengesa mune yedu Franchise UK dhairekitori & yepasi rose franchise mikana madhairekitori
Ndeapi mikana ye franchise?
Franchise mikana inzira yekugovera zvigadzirwa kana masevhisi nemvumo yebhizinesi maitiro, zvigadzirwa, masevhisi & ruzivo rwekuchenjera kune vanoita mari vanozoita mukati meiyo yakagadziriswa bhizinesi Franchise modhi. Anenge maviri mazinga evanhu anobatanidzwa mune yefranchise system: (1) iyo franchisor, iyo inopa iyo yekutengesa kana zita rekutengesa & bhizinesi system & (2) iyo Franchisee, inobhadhara inoenderera mberi yehumambo uye kazhinji mari yekutanga muripo wekodzero ita bhizinesi pasi pezita reiyo franchisor uye system.
Bhizinesi fomati franchising ndiyo mhando inonyanya kuzivikanwa kune munhu wepakati. Mune bhizinesi format franchise hukama, iyo franchisor inopa kune Franchisee kwete chete yayo yekutengesa zita, zvigadzirwa uye masevhisi asi hurongwa hwese hwekushandisa bhizinesi. Iyo franchisee inowanzo gashira kusarudzwa kweiyo saiti uye kutsigirwa kwekuvandudza, zvinyorwa zvinyorwa zvinoshanda, kudzidziswa, zviyero zvemhando, kutonga kwemhando, chirongwa chekushambadzira uye rubatsiro rwebhizinesi rekupa rubatsiro kubva kune iyo franchisor. Kunyange zvichizivikanwa zvishoma nezvekudyidzana, zvetsika kana zvigadzirwa zvekugovera zvigadzirwa chaizvo zvakakura mukutengesa kwakazara kupfuura bhizinesi fomu. Mune furu yakasarudzika, tarisiro haisi pachirongwa chekuita bhizinesi asi kunyanya pane zvigadzirwa zvakagadzirwa kana kupihwa neiyo franchisor kune iyo Franchisee. Mune akawanda, asi kwete ese, mamiriro, zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinowanzoda pre uye postale sevhisi sekuwanikwa muindasitiri yemotokari.
Franchise mikana inovhara maindasitiri mazhinji, kwete zvekudya sekufenda kunoita vazhinji. Mimwe mienzaniso ndeyekudyara gadheni & lawn franchise, bhizinesi kudzidzisa ma franchise, kuchengetwa kwevana, mota dzekutakura mota dzinosanganisira chengetedzo yemotokari, kugadzirisa uye kutengesa kwemotokari uye zvimwe zvakawanda zvichena, zvitoro & van based franchise. Muchokwadi chero bhizimusi iro rekuti hunyanzvi uye rezita rekutengesa rinogona kuchinjirwa rinogona kufambisirwa & yedu Franchise UK Directory iri imwe yedu yemakumi matanhatu epasi rose mikana Frigise mikana yako yaunogona kuongorora kuti uwane yako yakakodzera bhizinesi Franchise.
Nei uchitenga mukana we franchise?
A Franchise iri kunyora zvekare bhizinesi rakambobudirira saka kana ukaikopa chaizvo uye mamiriro emusika munzvimbo yako akafanana ipapo une mukana wakakura wekubudirira mubhizinesi rako nyowani. Nyanzvi dzakawanda dzinotungamira uye masangano ezvekudyidzana anozviti franchise yekutanga-up budiriro yakadarika 95%, yakakura kwazvo kupfuura kana iwe ukamisa bhizinesi uri wega. Chimwe chinhu chinotaridzika chaizvo kune vakawanda vanotenga franchise iri kukwanisa kuchinja basa rebasa. Kana iwe uchitenga franchise iwe uri kutenga yakatsanangurwa modhi uye inodzidziswa uye inotsigirwa nenyanzvi dzakaratidza muboka ravo saka inogona kuita nzira huru yebasa idzva kana kushandura rako ravepo bhizinesi rako pachako. Franchise vanachipangamazano vanogona kubatsira bhizinesi Franchise nekupa zano & kutungamira pane iyo yose franchising maitiro.
Tsvaga zvimwe nezve franchise inotengeswa
Pa webhusaiti iyi tine akawanda e-franchising zvinyorwa, nhau uye emahara franchising zviwanikwa uye ruzivo nezve huwandu hwenzvimbo yefranchise Association uk Isu tine nyika makumi matanhatu madhairekitori e franchise anotengeswa saka kuti utarise ma franchise ari kutengeswa munharaunda yako ingobaya pane dhairekitori rako Nyika uye ongorora yemunharaunda franchising nhau uye franchise inotengeswa. Rombo rakanaka nekutsvaga kwako iyo yakakodzera mukana weFrancise.
Tsvaga franchise UK uye yepasi rose franchise mikana, franchise nhau, bhizinesi zano uye franchise nhamba pane Franchiseek franchise dhairekitori.
Franchise mikana nenyika uye chikamu
Bata panhau dzenharaunda Franchise uye zvitsva zvinobuda pachena
Verenga pamusoro pebhizimusi nhau uye franchising rutsigiro kubva kune nyanzvi dzepano
Bata vatinoshanda navo kana vehukama masangano ekutsvaga rutsigiro pane zvigadzirwa zvemunharaunda
Kutanga rwendo rwako rwekukurumidza nhasi!
Puncturesafe Franchise Offers - Mutengo & Mutero Mari Chete Package chete Kuti Chengetedza Master License Yenyika Inoshanda kubva…
Ndivanaani Go-Haul Yakagadzwa muna 2016, Go-Haul yakaiswa nechinangwa chekushandura indasitiri yekutakura. Neayo…
ClearBrew ine huwandu hwenzvimbo dziripo dzefrancise iripo yekutengesa. Aya mabhizimusi akajeka eWhiteBrew ane varipo vatengi…